Ny lahatsary amin’ny chat Mpanadala mitondra ny hafainganam-pandeha Mampiaraka ao Beijing nanomboka ny taona. Nandritra ny taona izahay dia efa voalamina mihoatra ny socials, izay efa nihaona tamin’ny olona an’arivony ary namorona an-jatony tsiroaroa. Amin’izao fotoana izao, ny Fiarahana amin’ny chat Velona Mpanadala no lehibe indrindra any new York. Isam-bolana dia momba alina ny hafainganam-pandeha, ny Fiarahana, ny fanomezana ny olona avy amin’ny sokajin-taona rehetra ny fahafahana hifidy ny daty sy ny toerana nanaovana ny hariva Mampiaraka ao Beijing.
Fohifohy mamaritra ny zavatra miandry anao amin’ny antoko filalaovana fitia. Rehetra hafainganam-pandeha Mampiaraka dia natao ao amin’ny trano fisakafoanana, clubs, trano fisotroana, ny aina indrindra fa ity karazana zava-nitranga. Izany no toerana soft jiro, aina armchairs, ary sofas, ary koa ny kalitao avo ny mozika fitaovana sy ny asa fanompoana tsara.
Haingam-pandeha-Mampiaraka ireo ihany no matihanina ao amin’ny saha ny tsara indrindra sy ny sangany amin’ny mozika. Tany am-piandohana ny antoko, haingana Mampiaraka mpanolotra fandaharana miresaka momba ny fomba dia ho Express veloma. Avy eo dia, manomboka ny transplantation, ary isaky ny minitra mandritra ny mpanadala antoko eo amin’ny vaovao ny olom-pantatra. Nandritra ny mozika mandika ianao dia afaka mahazo ny fahazavana buffet. Azonao atao ihany koa ny angataho ny ankizivavy iray mba miadana ny dihy, ny misotro kafe. Tanora Express Mampiaraka afaka milalao tena malaza an-tserasera latabatra ny lalao, handray anjara amin’ny dihy tompon-pianarana. Eo ny hafainganam-pandeha Mampiaraka ny antoko tsy manana ny fifaninanana, ka tsy mamorona na inona na inona olana ny mpikambana ato amintsika. Amin’ny faran’ny Express Mampiaraka (ary izy ireo tamin’ny ora), dia azo atao ny mijanona ao amin’ny fikambanana maimaim-poana, ary mbola hijery ny tena mahasarika ny tovovavy na ny lehilahy.
Antoko fitia, dia natao tany Beijing ho an’ny isan-taona, toy ny taona, sy ho an’ireo izay mihoatra ny. Araka ny hita, ny ankehitriny Eoropeana ny teknolojia, antsoina hoe»speed-Mampiaraka»(Express hahita) tsy dia miorim-paka ao Beijing, fa dia nahazo ny lazany azy isan’andro.
Mazava ho azy, dia ny Maneho Mampiaraka dia maro tsara singa
Ankoatra ny tena ianao Mampiaraka fotsiny manana fotoana tsara.
Ary ny antoko Mampiaraka mba hamela izany ho hatao.
Izay tonga hafainganam-pandeha Mampiaraka
Ny tena tanjona ny antoko vahiny hafainganam-pandeha Mampiaraka dia, mazava ho azy, hihaona zazavavy iray na lehilahy iray ho an’ny fifandraisana matotra.
Vahiny te hifanerasera, mpanadala, dihy sy fotsiny ny voly hariva